Kuendesa Chikwata cheCyber Hondo
Iwe unozoona kukosha kwekuve nekutevera pre-yakatsanangurwa CSIRT marongero nemaitiro; nzwisisa nyaya dzehunyanzvi dzine chekuita nemhando dzinowanzotaurwa nezvekurwiswa; ita ongororo uye ekupindura mabasa ezviitiko zvakasiyana zvemuenzaniso; shandisa hunyanzvi hwekufunga zvine mutsindo mukupindura kuzviitiko, uye uone matambudziko angangodzivirirwa paunenge uchitora chikamu mu CSIRT basa.
Iyo kosi yakagadzirirwa kupa nzwisiso mune iro basa iro iro chiitiko chinobata chingaite. Ichapa muongororwo wezviitiko zvinobata nhandare, kusanganisira masevhisi eCSIRT, kutyisidzira kwevanopinda, uye mhando yezviitiko zvekupindura zviitiko.
Iyi kosi ndeyevashandi vane zvishoma kana vasina chiitiko chiitiko chekubata. Inopa sumo yakakosha kune huru yechiitiko inobata mabasa uye hunyanzvi hwekufunga kugona kubatsira vanobata zviitiko kuita kwavo kwezuva nezuva. Inokurudzirwa kune avo vatsva kune chiitiko chekubata basa. Uchave nemukana wekutora chikamu muzviitiko zvemuenzaniso zvaunogona kusangana nazvo zuva nezuva.
ONA: Iyi kosi inowedzera mapoinzi akananga kuMasters muCyber ​​Security kubva kuSoftware Injiniya Institute
Kudzidziswa kwepamhepo Kuuya Munguva pfupi
Ndiani anofanira kuita kosi iyi?
Vashandi vane zvishoma kana vasina chiitiko chekubata chiitiko
Chiitiko chine ruzivo chinobata vashandi vangade kuvandudza maitiro uye hunyanzvi vachipesana nemaitiro akanakisa
Chero ani zvake angade kudzidza nezve zvakakosha zviitiko kubata mabasa uye zviitiko
Izvo iwe zvauchadzidza
Iyi kosi ichakubatsira iwe ku
Shandisa vashandi vako kuti vadzivirire bhizinesi rako pakurwiswa kwecyber.
Ziva kukosha kwekutevera zvakanyatsotsanangurwa maitiro, marongero, uye maitiro ebhizinesi rako.
Nzwisisa hunyanzvi, kutaurirana, pamwe nekugadzirisa nyaya dzakabatanidzwa mukupa se CSIRT sevhisi
Ongorora uye ongorora kukanganiswa kwezviitiko zvemakomputa ekuchengetedza.
Zvinobudirira kuvaka uye kurongedza mapindiro ekupindura emhando dzakasiyana dzecomputer kuchengetedza zviitiko.